Ofu njehie na ndenye aha iCloud debara aha n'izu a | Esi m mac
Edozi njehie ndenye aha iCloud edere n'izu a
Nke a izu gara aga e nwere njehie na ọrụ ndenye aha iCloud. Kpọmkwem, kemgbe mmalite nke izu ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ nke ọrụ 50 Gb maka euro 0,99 na ọnwa, yana 200 Gb maka 2,99 euro / ọnwa, na-anata ozi na-adọ ha aka na ntị na akwụsịla ọrụ ha. A gwa ndị ọrụ ndị ọzọ banyere ndọrọ ego site na email. Ndị ahịa Apple ndị a mere ngwa ngwa inweta Apple n'ihi na taa anyị na-edebe ọtụtụ ozi na ọrụ igwe ojii. Taa edoziwo nsogbu ndị ahụ, na Apple agwawo ndị ọrụ site na email na-akọ akụkọ ahụ ma rịọ mgbaghara.
Ma ozi nhichapụ akaụntụ ahụ, yana ozi ịntanetị metụtara mmechi nke ọrụ maka ndị ọrụ emetụtara, bụ ozi ezighi ezi n'akụkụ Apple, dị ka akọwara na ozi ịntanetị ezitere:
Ezigbo (aha ndị ahịa),
Na-adịbeghị anya natara ozi na-ezighi ezi na-ekwu na gị iCloud nchekwa atụmatụ a kagbuo. Atụmatụ nchekwa nchekwa gị ___ GB iCloud anaghị emetụta ma ga-aga n'ihu na-emegharị akpaaka.
Anyị na-arịọ mgbaghara maka nsogbu ọ bụla nwere ike ịbụ kpatara gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị.
Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro mweghachi nke usoro ahụ ma hụ na a ga-agbanwe ọhụụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ma, anyị amaghị ebe nsogbu a si. Nke a bụ nnukwu nsogbu nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ozi dị nro na ọkwa onwe ha, dị ka foto ma ọ bụ akwụkwọ bara uru dị mkpa. Ya mere, anyị na-akwado mgbe niile ka ị nwee ozi na igwe ojii iji mekọrịta ha n'etiti ngwaọrụ, mana ọ dị ezigbo mkpa na ozi a dị na nkwado ndabere anụ ahụ iji zere nsogbu ndị nwere ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Edozi njehie ndenye aha iCloud edere n'izu a
Total War: WARHAMMER dị ugbu a na Mac App Store
MacOS 10.12.5 Beta, Wozniak na-ekwu maka Apple, Starcraft Original egwuregwu, na ndị ọzọ. Kachasị mma izu na SoydeMac